Bofu / Kuvigwa Via - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Vias, kureva, mhangura kuifukidza mumakomba, basa rinokosha iri interconnection pakati akaturikidzana ari rakadhindwa redunhu bhodhi. Kazhinji, vias mu PCBs zvinogona Classified kupinda zvinotevera mumapoka: kuburikidza-buri Via, mapofu Via uye akavigwa Via. Bofu / akavigwa vias zvinonzi nevakawanda kushandiswa SMT (pemvura Mount Technology) chete kudzikamisa zvazvakashatira kuburikidza-mugomba vias.
Bofu med chinobatanidza mumwe rukoko zvokunze uye mumwe kana kupfuura yomukati akaturikidzana mukudhinda redunhu puranga, basa interconnection pakati pamusoro rukoko uye yomukati akaturikidzana kana bottom rukoko uye yomukati akaturikidzana.
Kuvigwa vias batanidza akaturikidzana chete yomukati mukati akadhindwa redunhu Board kuitira kuti ivo zvisingaoneki chete achibva kuruvanze nezve pcb kubva vari nechomukati "akavigwa".
Bofu / akavigwa vias titevedzere arambe achirema kuvandudza pakati pamapuranga pasina kudiwa kuwedzera nhamba akaturikidzana kana bhodhi saizi. Naizvozvo, mapofu / akavigwa vias zvinowa- kushandiswa HDI PCBs. Isai neimwe nzira, mapofu / akavigwa vias zvinogona vakanonga kana iwe chirwere zvakasimba chinodiwa shoma nzvimbo uye kuburikidza-buri hassles.
Nokuda kwedu makore anopfuura 20 'ruzivo indasitiri ino, pcb Anoshamisa unyanzvi vari kugadzira PCBs pamwe bofu / akavigwa vias. mainjiniya uye kugadzira zvose midziyo kubva Wonderful pcb nechokwadi yedu yakazara nezvaanogona mu zvinodiwa mapofu / akavigwa Via rwokugadzira.
Kusvikira zvino, tiri vanokwanisa kupa mechanically akachera uye Laser akachera mhinduro. Kana totaura zvokuimba kuchera, vachishandisa dhayamita neeSultan kubva 0.2mm kusvika 0.4mm apo 0.1mm kuti Laser kuchera.
Zvichienderana wako chirongwa kuti zvinodiwa, unogona kusarudza runoenzanirana chibooreso diameters vari zvinhu apo kuwana chinhu chitaurwa pakarepo kuti PCBs. Kuti uwane mashoko pamusoro bofu / akavigwa vias, tiri nguva dzose kuwanikwa pa wonderful@wonderfulpcb.com .